Ny fandaharam-potoana momba ny famoahana ny rindrambaiko ho an'ny Instagram Ao amin'ny Moet Zijn Van Elke Marketingstrategie
Teneno dia tokony hanolotra ny orinasan-tserasera rehetra ny orinasan-tserasera. Ny haino aman-jery sosialy dia manana ny lanjany amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fampahalalam-baovao. Raha mahatsikaiky, miaraka amin'ny 1.200 mpitsidika isan-tsegondra ao amin'ny Instagram, dia manomboka ny 180 miliara dolara isan'andro - vps hosting cheap linux computer. Raha ny fanadihadiana dia ny famantarana ny Instagram no tena marina. Amin'izao fotoana izao dia mila mampiasa teknika ny tetikady manokana mba hahafahan'ny orinasam-pampandrosoana atao mba hikarakarana ny tsara indrindra amin'ny media sosialy amin'ny aterineto any amin'ny ankamaroan'ny tambajotra sosialy ny orinasa.
Alexander Peresunko, Mpanantanteraka Success Manager van Semalt Digital Services, dia maneho ny maha-zava-dehibe ny maha-zava-dehibe ny Instagram
Ny orinasa lehibe indrindra dia miisa 18 taona ka hatramin'ny 24 taona ka hatramin'ny $ 74.000. Ho an'ity lahatsoratra ity dia ny Instagram amin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy iray malaza. Noho ny fitaovana hafa an'ny haino aman-jery sosialy dia maro an'isa no betsaka kokoa noho izany - hatramin'ny $ 25.000 ka hatramin'ny $ 49.000 isan-taona.
Instagram dia miditra ao anaty sokajy avy amin'ny sehatra avo lenta izay ampiasaina mba hamantarana ny vokatra. Ny 45,6% n'ny mpampiasa dia nanambara fa tsy afaka ny hahatsikaritra ny zava-misy ny vokatra iray raha te-hahita ny Instagram sy ny fampahalalam-baovao mahazatra..
Nianatra momba ny toeram-pivarotan-tseranana izay nahatsikaritra fa nahazo ny mari-pahaizana amin'ny Instagram izy ireo, ny nomeraon-n'ireo nomena efa zato taona no nampiasaina. Ny sehatra Instagram-platform dia manampy amin'ny fanatontosana ny vondrona lehibe indrindra, ny fikolokoloana ary ny loyalty.
Verindrohy ao amin'ny Instagram
Instagram bloeit ho toy ny tambajotra iray mahomby satria manindry ilay inhoud. Manana mihoatra ny 300 tapitrisa ny fampiasana ny tontolo manodidina ny 257 minitra eo ho eo isan-taona amin'ny fiatoana. Ny instagram avy amin'ny Instagram dia voatery mifantoka amin'ny fampiasana ny fampiasana sy ny kalitaon'ny fahitana. Ireo mpikatroka mafonja dia namorona ny zava-drehetra. Instagram no namorona ny totalim-bola amin'ny 150 an-dalam-panafahana amin'ny famoahana ny vala andro farany ary nahazoana alalana 1 tapitrisa dolara ho an'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny tsenam-barotra nasionaly dia nahatonga ny sarin-tseraseran'ny seranam-piaramanidina, ary ny orinasan-tserasera dia nampiakatra
Ny olana mahomby
Ireo mpitsidika dia atolotra ho an'ny tokantrano, ary ny fampiasana azy no mahatonga ny tanjona fa tsy misy fiantraikany eo amin'ny firenena, fitaovana mahatsara sy mahonena eo amin'ny sehatr'asa. Ny sasany amin'ireo fitaovana izay te hahalala amin'ny instagram dia nahazo,
Maak tsara tarehy. Ny tena mahavariana dia ny hoe, ny mihoatra ny mpandeha
Ataovy ny safidinao (POV). Adidin'ny mpiserasera rehetra ny mpampiasa misahana ny fampiroboroboana ny varotra
Vestig visuele identity. Amin'ny fampiasana fitaovam-pandrafetana iray, alao sary an-tsaina ny fehezan-teny sy ny toetoetra. Mood boards zorgen voor de gewenste uitstraling van de mark
Ny antony nahatonga ny olona ho voasoratra dia ny fahatsapana fihetseham-po sy fihetseham-po. Ny an-dry zareo dia mamoaka ny ampahany betsaka amin'ny fampahalalam-baovao ao anaty format malalaka. Ny tahirin-kevitra avy amin'ny be mpampiasa indrindra, mampitombo ny fahafaha-misaina amin'ny 94 isan-jato, mba hanamafisany ny teny sy ny fihetseham-po mimenomenona. Ny olona dia mamorona fifandraisana amin'ny zavatra izay azo jerena ao an-tsainy. Ny fiarovana ara-tsosialy dia eo amin'ny sehatry ny maso sy ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fampitam-baovao. Ity dia mila mampiasa ny fotoana hananganana ny marika amin'ny fampiasana ny vohikala populaire, Instagram.